ယခင်က စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးကိစ္စများသည် မရှိသလောက်နည်းပါးခဲ့ပါသည်။ ၁၉၆၀ နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင်မူ စားသုံးသူများအား အကာအကွယ်ပေးရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် လှုပ်ရှားမှုများသည် ဥရောပတိုက်နှင့် မြောက်အမေရိကတိုက်တို့မှ စတင်မြစ်ဖျားခံလာခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ညီလာခံတွင် အမေရိကန်သမ္မတ John F. Kennedy သည် သမိုင်းဝင်ကြေငြာချက်အဖြစ် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုပြောကြားချက်အရ အားပေးထောက်ခံမှုများသည် အရှိန်အဟုန် မြင့်မားစွာ ပြန့်ပွားခဲ့ပေသည်။ ၁၉၇၀ နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင် ကမ္ဘာ့ကုလသမ္မဂအဖွဲ့ကြီး၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ထံသို့ စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးကောင်စီ၏ တောင်းဆိုချက် ကြောင့် စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေး ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဆင့်သို့ စတင်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ ကုလသမ္မဂ၏ လမ်းညွှန်ချက်များကို ပထမဦးစွာ ၁၉၈၅ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၆ရက်နေ့တွင် အထွေထွေညီလာခံမှ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် (၃၀/၂၄၈)ဖြင့် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးကောင်စီမှ ၁၉၉၉ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၆ရက်နေ့တွင် ဆုံးဖြတ်ချက် အမှတ် (၁၉၉၉/၇)ဖြင့် ထပ်မံတိုးချဲ့အတည်ပြုခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၂ရက်နေ့တွင် အထွေထွေညီလာခံမှ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် (၇၀/၁၈၆)ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်ကာ လမ်းညွှန်ချက် (၈)ရပ်ဖြင့် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။
ထိုလမ်းညွှန်ချက် (၈)ရပ်သည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ စားသုံးသူများအတွက် မိမိနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ စားသုံးသူများ၏ ဓလေ့စရိုက်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့် ဆက်စပ်ဆက်နွယ်မှုအလျောက် မိမိတို့နှင့် ကိုက်ညီမည့်ဥပဒေ၊ နည်းစနစ်များ၊ မူဝါဒ များချမှတ်နိုင်ရန် စံလမ်းညွှန်ချက်အဖြစ် လက်ခံကျင့်သုံး ကြပါသည်။ စားသုံးသူ ပြည်သူ များ၏ ဘဝခရီးတစ်လျှောက် မလုံခြုံမှု ဘေးဥပဒ် အန္တရာယ်များ အခတ်အခဲများ ကြုံတွေ့ရ နိုင်ပါသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်များကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ နည်းစနစ်ကျသည့် အစီအမံများ လမ်းညွှန်ချက်များ လိုအပ်ပါသည်။ စာရေးဆရာ ဦးအောင်သင်းက ဟောပြောပွဲတစ်ခုမှ လူမပြောနဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေတောင် အသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်အောင် အစာရှာရသလို ဘေးအန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ပညာသင်ကြားရကြောင်း(Animal Education) အကြောင်းကို ဟောပြောသွားတာ ကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။ လူသားများဖြစ်တဲ့ စားသုံးသူနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များသည် စားသုံးသူကာကွယ်ရေး နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းနှင့် လမ်းညွှန်ချက် များကို သိရှိထားသင့် ပေသည်။
လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့် စားသုံးသူများ ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို ဘေးဥပဒ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ အသုံးပြုခွင့်ရရှိစေရန်(The Right To Safety) ဖြစ်ပါသည်။
စားသုံးသူများ ဘဝခရီးသွားမယ်ဆိုရင် ဘေးဥပဒ်အန္တရာယ် အကြောင်းသိထားရပါမယ်။ ဘေးဥပဒ်အန္တရာယ်ကို (၂)မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ပထမတစ်ခုက သဘာဝကပေးတဲ့ ဘေးဥပဒ်အန္တရာယ်ပါ၊ ရေကြီးခြင်း၊ မိုးခေါင်းခြင်း၊ ငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ မြေပြိုခြင်း၊ မုန်တိုင်းကျခြင်း ကပ်ဘေးရောဂါဆိုးကြီးတွေ ဆိုက်ရောက်ခြင်း စသည်ဖြင့် အများကြီး တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်တွေက စားသုံးသူများ၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို တိုက်စားဝါးမြိုပြီး ဘေးဥပဒ်တွေ မမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ဆိုးကြီးတွေ ပေးခဲ့တာကို စားသုံးသူများအသိပင် ဖြစ်ပါသည်။ စားသုံးသူများဟာ မိမိတို့နေထိုင်အသက်ရှင်ဖို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အမှီသဟဲပြုပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကပေးတဲ့ သီးပင်စားပင်နဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေကို စားသုံးခဲ့ကြပါသည်။ သစ်ပင်ဝါပင်တွေကို နေထိုင်ဖို့နှင့် လောင်စာအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။ ဥတုရာသီကိုမှီပြီး စိုက်ပျိုးမွေးမြူစားသုံးခဲ့ကြပါသည်။ လူတို့၏ လိုအပ်ချက်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဂေဟစနစ်တွေဟာ သဟဇာတဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။
သို့သော်လည်း များပြားလာသည့် စားသုံးသူဦးရေ၊ လိုအပ်ချက်တွေများလာတဲ့ စားသုံးသူများ၏ ဘဝဖြစ်စဉ်များ ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ စားသုံးသူများ၏ ဘဝကို တွန်းအား ပေးလာသည့် လောဘကြောင့် အမှားလမ်းစဉ်ကိုကြီးထွားလာစေခဲ့ပါသည်။ စားသုံးသူများ သည် လိုအပ်တာထက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို စားသုံးရုံမက ဖြုန်းတီးပျက်စီးစေသည့် ပုံစံများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ သဘာဝ‌ဂေဟစနစ်တွေနှင့် ဇီဝဖြစ်စဉ်များ ကစဉ်ကလျားနဲ့ ယိုယွင်းချည့်နဲ့လာခဲ့ပါသည်။ စားသုံးသူတို့နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အကျိုးပြုခဲ့တဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်သည် ပျက်စီးပြုန်းတီးပြီး လူ့လောကကို ရန်ညိုးနဲ့ ဘေးဥပဒ်ဆိုးကျိုးများ ပေးလာခဲ့ ပါသည်။ ဒီဖြစ်စဉ်တွေကတော့ သဘာဝကပေးတဲ့ဘေးဥပဒ်ဆိုးကျိုးများအဖြစ် သိထားသင့် ပါသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်များကို ဥပမာယူပြီး စားသုံးသူကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် စားသုံးသူအကျိုးစီးပွားနှင့် ယဉ်တွဲ၍ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရမည့် ဟု လမ်းညွှန်ချက်တွင် ထည့်သွင်းလမ်းညွှန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဘေးဥပဒ်အန္တရာယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ စားသုံးသူများ၏ အသိပညာဗဟုသုတ အားနည်းမှု၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ မိမိအကျိုးစီးပွားကို ဦးတည်သည့် လွဲမှားသော စီးပွားရေးအလေ့အထများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဘေးဥပဒ်အန္တရာယ်နှင့် နစ်နာမှုများ ဖြစ်ပါသည်။ “ရေစီးသန်ရင်ကမ်းပြိုတယ်” ဟူသော ဆိုရိုးစကားအတိုင်း စားသုံးသူတို့ရဲ့ ဓလေ့စရိုက် ပြောင်းလဲလာမှု အစားအသောက်၊ အသုံးအဆောင်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများသည် ခေတ်စနစ်အရ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် အံ့မခန်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာပါသည်။ တိုးတက်မှုရေစီး ကြောင်းသည် စားသုံးသူများ၏ ဓလေ့စရိုက်ကိုပါ ပြောင်းလဲပြီးလိုက်ပါ စီးမြောစေခဲ့ပါသည်။ တိုးတက်မှုတိုင်းမှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိတတ်ပါသည်။ တိုးတက်မှုနှင့် လိုက်ပါလာတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို စားသုံသူများသိမြင်ဖို့ စားသုံးသူရေးရာ ဗဟုသုတ လိုအပ်ပါသည်။ ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများဟာ စားသုံးသူတို့အတွက် လုံခြုံမှုတွေနည်းပါး လာပါသည်။ ဥပမာ- ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်လို့ လက်ကိုင်ဖုန်းတွေပေါ်လာသည်။ ကမ္ဘာကြီးဟာ ရွာကြီး တစ်ရွာကဲ့သို့ ဆက်သွယ်ရချိတ်ဆက်ရလွယ်ကူလာပါသည်။ တစ်နေရာနှင့် တစ်နေရာ မိုင်ရာချီဝေးပေမယ့် မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောလို့ရလာပါသည်။ ခေတ်မှီတဲ့တိုးတက်မှု ဖြစ်လာသည်။ တိုးတက်မှုနောက်ကွယ်မှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးက ကပ်ပါလာတာပဲ အဲ့ဒီ ဆိုးကျိုးကတော့ သိလျက်နဲ့ဆေးမရှိတဲ့ရောဂါမျိုးနဲ့ ဝင်ငွေရော စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မလုံခြုံမှုနှင့်ကြုံတွေ့နေရသည့် စားသုံးသူများ၏ ဒုက္ခပင်ဖြစ်ပေသည်။
ဖုန်းကိုင်ပြီး တစ်နေကုန် ကလေး၊ လူကြီးအရွယ်စုံပဲ ဖုန်းနဲ့ပျော်မွေ့နေကြသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကတော့-
“အဆော့လွန်ပြီး မပုဒ်သိုးတဲ့ ခန္တာကိုယ် နှင့်မိဘကို နှစ်ရှည်လများ ဒုက္ခပေးတဲ့ ဉာဏ်ရည်မမှီတဲ့ ကြောင်တောင်တောင် သားသမီးတွေ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိမလဲ”
“အချိန်နှင့်တိုးတက်မှု အညွှန့်အဖူးကို စားသုံးပြီး အမြင့်တက်မည့် ဘဝလှေကား နောက်ပြန် ဆင်းသူတွေ ဘယ်လောက်များလေမလဲ”
“စိတ်ဆွဲလန်းမှုကြောင့် အသက်ပါပေး လိုက်ရတဲ့ နိုင်ငံရဲ့ရတနာ Game player တွေ ဘယ်လောက်များပြီလဲ”
တိုးတက်မှုတိုင်းမှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိတယ်ဆိုတာ စားသုံသူများ ခံစားသိမြင်ပြီး ထိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်များသည် ဘေးဥပဒ်အန္တရာယ်နှင့် တိုးတက်မှုများမှ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ကြောင်း စားသုံးသူများသိထားသင့်ပေသည်။
စားသုံးသူတို့၏ နိစ္စဓူဝ တွေ့ကြုံနေရတဲ့ဘေးဥပဒ်အန္တရာယ်တွေကို ဘယ်လိုအကာ အကွယ်ပေးကြမှာလဲ၊ ဘယ်လိုမူဝါဒတွေချမှတ်ထားသည်ကို လေ့လာသုံးသပ်သင့်ပေသည်။ ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ မလုံခြုံမှုနှင့် ဘေးဥပဒ်အန္တရာယ်တွေကို ဖြေရှင်းကိုင်တွယ် တည့်မတ်ပေးဖို့ စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ ၁၄ရက်နေ့နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ၊ ၁၅ရက်နေ့မှာ ဥပဒေနှင့် စားသုံးသူကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။ စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေကို အကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနကို ၂၀၁၅ခုနှစ် ဧပြီလမှာ ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးနှင့် စားသုံးသူ ရေးရာဦးစီးဌာနကို ၂၀၁၆ခုနှစ် ဧပြီလမှာ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန အဖြစ်လည်းကောင်း ဖွဲ့စည်းပြီးလုပ်ငန်းများဆောင် ရွက်ခဲ့ပါသည်။
- မြန်မာနိုင်ငံ စားသုံးသူရေးရာ ကော်မရှင်
- တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ ပြည်ထောင်စု နယ်မြေ စားသုံးသူရေးရာကော်မတီများ
- ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ စားသုံးသူရေးရာကော်မတီများ
- တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ဦးစီးမှူးရုံးများ၊
- ခရိုင် စားသုံးသူရေး ရာ‌ကော်မတီများ
- စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့နှင့် စစ်ဆေးရေးအရာရှိများ
စသည်တို့သည် အခြေခံဈေးကွက်မှ စတင်၍ ကြီးမားကျယ်ပြန့် သည့် စားသုံးသူတို့၏ နိစ္စဓူဝ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်များကို စနစ်တကျနှင့် ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများရေးဆွဲပြီးဖြစ်သည့် စံလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များနှင့် စစ်ဆေးရေးအရာရှိမှ အဆင့်ဆင့်ကော်မရှင်အထိအပြန် အလှန်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပြီး စားသုံးသူများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအကြား အားနည်းမှု ထိခိုက်ပွတ်တိုက်မှုများကို လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း စားသုံးသူများ အကျိုးစီးပွားအတွက် ဥပဒေ၊ မူဝါဒနှင့် နည်းစနစ်များချမှတ်၍ ဆောင်ရွက်နေသည့် စားသုံးသူအကာအကွယ် ပေးရေး ဆောင်ရွက်မှုများဖြစ်သည်ကို သိရှိလေ့လာထားသင့်ပါသည်။
ပြည်သူလူထုများ စားသုံးသူရေးရာအသိပညာနှင့် ဗဟုသုတ ပြည်စုံကြွယ်ဝမှုဆန်း စစ်ချက်စစ်တမ်းများကောက်ယူခြင်း လုပ်ငန်းနည်ပယ်အလိုက် စားသုံးသူအကျိုး စီးပွားကို ထိရောက်စွာကာကွယ်ပေးနိုင်ရန် စစ်ဆေးရေးအရာရှိများ ခန့်အပ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ သည်။ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ၌ စစ်ဆေးရေးအရာရှိ (၃၆၅)ဦး တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် စစ်ဆေးရေးအရာရှိ (၁၅၄)ဦး၊ ၂၀၂၁ခုနှစ်တွင် (၄၉)ဦးနှင့် ၂၀၂၂ခုနှစ်တွင် လည်း လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (၂)ကြိမ် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ စားသုံးသူ များသည် ကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုကြောင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နစ်နာမှု၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်နစ်နာမှု၊ ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နစ်နာမှုများမှ အကာအကွယ်ပေးပြီး အရည်
အသွေးအဆင့်အတန်းမြင့်မားသော ကုန်ထုတ်စွမ်းအားစုများ ထွန်းကားစေရန်နှင့် ပြည့်စုံ ကောင်းမွန်သော စဉ်ဆက်မပြတ် စားသုံးမှုစနစ် ထွန်းကားစေရန် ရည်ရွယ်လျက် လုပ်ငန်း များဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ထိုရည်ရွယ်ချက်၊ ဥပဒေနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များသည် စားသုံးသူ များကို အကာအကွယ်ပေးရန် စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု နည်းစနစ် များဖြစ်ကြောင်း သိထားသင့်ပေသည်။
လူသားတို့သည့် အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုအတွက် ရှာဖွေစားသောက်ရသလို ကျရောက် လာမည့် မလုံခြုံမှု ဘေးဥပဒ်အန္တရာယ်များကိုလည်း ကာကွယ်ရမည်မှာ စားသုံးသူတို့၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။ မလုံခြုံမှုဖြစ်စေတတ်သော ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်များ ဘေးဥပဒ်အန္တရာယ်များနှင့် ထိုအကြောင်းအချင်းအရာများကို စနစ်တကျ ကာကွယ်ကျော်လွှာနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ ချိတ်ဆက်ရမည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ လိုက်နာရမည့်လမ်းညွှန်ချက်များကို စားသုံးသူများ အသိ ပညာဗဟုသုတရစေရန်နှင့် လိုက်နာ ကျင့်သုံးတတ်သော စားသုံးသူရေးရာ အလေ့အကျင့် ကောင်းများ တိုးတက်ထွန်းကာစေရန် ရည်ရွယ်လျက် ဘဝခရီးကို လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် လျှောက်လမ်းဖို့ စားသုံးသူကာကွယ်ရေး ဗဟုသုတဖြည့်ဆည်းမှု ခရီးတစ်ထောက်နားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကိုးကားချက်။ (၂/၂၀၂၂) လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
United Nation Guide Line
Read more about စားသုံးသူကာကွယ်ရေးလမ်းညွှန်ချက်များနှင့် စားသုံးသူများ၏ဘဝခရီး
အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်စားသုံးသူရေးရာကော်မတီဥက္ကဌ၊ စီးပွားရေးရာဝန်ကြီး ဌာန၊ ဝန်ကြီး ဦးစိန်ဦးက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၊ ကယားပြည်နယ် စားသုံးသူရေးရာကော်မတီအတွင်းရေးမှူး ဦးမြင့်အောင်က (၂/၂၀၂၂) လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် အမှာစာ(၃)စောင်အား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီး ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပထမသုံးလပတ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခြေအနေများ၊ တိုင်ကြားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ CICC၊ www. doca. gov. mm နှင့် စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၏ Consumer Call Center 1535 သို့ ဆက်သွယ်တိုင်ကြားနိုင်ပါကြောင်း တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ရာ တက်ရောက်လာကြတဲ့ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များက အမှာစာများအား အတည်ပြုမှတ်တမ်းတင်ပြီး အသီးသီးပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက် အစည်းအဝေးကို (၁၅း၃၀)နာရီအချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Read more about ကယားပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်စားသုံးသူရေးရာကော်မတီ (၂/ ၂၀၂၂) လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ
စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ပေါင်မြို့နယ်တာဝန်ခံသည် ၂၇.၆.၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဖြင့် ပေါင်မြို့နယ် လမ်းဘေးဝဲ/ယာရှိ စတိုးဆိုင်နှင့် ကုန်စုံဆိုင်များ၊ ဘူတာလမ်းဘေးဝဲ/ယာရှိ စတိုးဆိုင်နှင့် ကုန်စုံဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ အပါအဝင် ဆိုင်ပေါင်း(၈)ဆိုင်ကို ဈေးကွက်စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆိုပါဆိုင်များ၌ ရောင်းချလျက်ရှိသော ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများမှာ သက်တမ်းကျော်လွန်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ခွင့်ပြုထောက်ခံချက် ရှိ/မရှိ၊ ကုန်အညွှန်းအမှတ်အသား ဖော်ပြချက်ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြခြင်း ရှိ/မရှိနှင့် ထုတ်ကုန်လုံခြုံစိတ်ချရမှု ရှိ/မရှိ ဈေးကွက်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Read more about မော်လမြိုင်ခရိုင် ပေါင်မြို့နယ်၌ ဈေးကွက်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းဆောင်ရွက်
မွန်ပြည်နယ်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၊ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့၊ နေ့လည်(၂:၀၀)နာရီအချိန်က မွန်ပြည်နယ် စားသုံးသူရေးရာကော်မတီ(၂/၂၀၂၂) လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
မွန်ပြည်နယ် စားသုံးသူရေးရာကော်မတီ(၂/၂၀၂၂) လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး၌ မွန်ပြည်နယ် စားသုံးသူရေးရာကော်မတီဥက္ကဌ၊ စီးပွားရေးရာဝန်ကြီး၊ ဦးနိုင်လယိတမက အဖွင့် အမှာစကား ပြောကြားကြောင်း၊ မွန်ပြည်နယ် စားသုံးသူရေးရာကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး၊ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး ဦးဝင်းထွန်းက ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၏ ပထမ(၃)လပတ်အတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေး အသိပညာပေးခြင်း၊ ဈေးကွက်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ၊ ကုန်အညွှန်းအမှတ်အသားများဆောင်ရွက်နိုင်မှု၊ တိုင်ကြားမှုနှင့် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ချက်များအား Power Point ဖြင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များသို့ တင်ပြခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါတင်ပြချက်များအား မွန်ပြည်နယ်စားသုံးသူရေးရာကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များမှ အတည် ပြုရန်အချက်များ၊ အကြံပြုချက်များ၊ ဆုံးဖြတ်ရန်အချက်အလက်တို့ကို ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် အသီးသီးမှ ပြန်လည်ဆွေးနွေး၍ အတည်ပြုခြင်း၊ အကြံပြုခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ရန်အချက်တို့အား ယခုအစည်းအဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း၊ရှေ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် စားသုံးသူကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးကို နေ့လည်(၃:၂၀)နာရီတွင် ရုတ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Read more about မွန်ပြည်နယ် စားသုံးသူရေးရာကော်မတီ၏ (၂/၂၀၂၀)လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်တာဝန်ခံရုံးမှ ဦးဇော်လင်းအောင်(ဒု-ဦးစီးမှူး)သည် (၂၇.၆.၂၀၂၂)ရက်နေ့ နံနက်(၁၀)နာရီခွဲအချိန်တွင် ယိုးတရုတ်(စံပြ)ကျေးရွာရှိ အောင်ပညာမြင့် ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းဆင့်သင်ကျောင်းတွင် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲ ကျင်းပဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအသိပညာပေးဟောပြောပွဲတွင် စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန ပုဏ္ဏားမြို့နယ်တာဝန်ခံ ရုံးမှ ဦးဇော်လင်းအောင်(ဒု-ဦးစီးမှူး)က ဌာန၏မျှော်မှန်းချက်၊ ရည်မှန်းချက်များ စားသုံးသူ၏ အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏တာဝန်များ၊ စားသုံးသူကာကွယ်ရေး ဥပဒေပါ အခန်း(၁၈) ကုန်အညွှန်းအမှတ်အသားဖော်ပြခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ (၁၅)ရက်နေ့မှစတင်၍ ကုန်အညွှန်းအမှတ်အသားတွင် မြန်မာဘာသာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မြန်မာဘာသာနှင့် အခြားဘာသာတွဲလျှက်ဖြစ်စေ ဖော်ပြပါရှိမှသာလျှင် ဈေးကွက်အတွင်းသို့ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျန်မာရေး၊ ပညာရေးဝန်ဆောင်မှု၊ ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစသည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင်လည်းကောင်း၊ အစားအသောက်နှင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း နစ်နာ ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်လာပါက စားသုံးသူသတင်းပြန်ကြားရေးနှင့် တိုင်ကြားမှုလက်ခံဆောင်ရွက်ရေး စင်တာ (CICC)ရုံး ဖွင့်လှစ်ထားရှိရာသို့ လာရောက်တိုင်ကြားနိုင်သလို w.w.w doca gov.mm မှလည်းကောင်း၊ Doca Myanmar မိုဘိုင်းဖုန်း အက်ပလီကေရှင်းမှလည်းကောင်း တိုင်ကြားနိုင်ပါကြောင်း ဟောပြောဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
Read more about ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် ယိုးတရုတ်(စံပြ)ရွာ အောင်ပညာမြင့် ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းဆင့် သင်ကျောင်းတွင် စားသုံးသူကာကွယ်ရေး အသိပညာပေးဟောပြောခြင်း
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော စပါး/ဆန်ဈေးနှုန်းများနှင့် စီးထွက်မှုအခြေအနေ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးသည် ဇွန်လ(နောက်ဆုံး)ပတ်၌ စပါး/ဆန်ဈေးနှုန်းများမှာ ဆန်ပို့ဒေသများဖြစ်သော မုံရွာခရိုင်တွင် စပါးဈေး အနည်းငယ်တက်နေပြီး၊ ကျန်ခရိုင်များတွင် ဈေးအေးနေပါသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဇွန်လ(နောက်ဆုံးပတ်)တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေခံစားကုန်ဈေးနှုန်းများမှာ ရွှေဘိုခရိုင်တွင် ရွှေဘိုပေါ်ဆန်း(စပါး) တင်း၁၀၀လျှင် ကျပ်(၁၅၅၀၀၀၀)၊ ပေါ်ဆန်း(ဆန်) ၂၄ ပြည်ပါ တစ်အိတ်လျှင်ကျပ် ၅၅၀၀၀၊ ဧရာမင်း(စပါး)တင်း ၁၀၀ လျှင် ၁၀၅၀၀၀၀၊ ဧရာမင်း(ဆန်) ၂၄ ပြည် ပါ တစ်အိတ် ကျပ် ၄၄၀၀၀၊ ရေဦးမြို့မှ ပေါ်ဆန်း (စပါး) တင်း ၁၀၀လျှင် ကျပ် ၁၃၅၀၀၀၀၊ ပေါ်ဆန်း (ဆန်) တစ်အိတ်လျှင်ကျပ် ၅၂၀၀၀၊ ဧရာမင်း (စပါး) တင်း၁၀၀ လျှင် ၉၀၀၀၀၀၊ ဧရာမင်း (ဆန်)၂၄ ပြည် ပါ တစ်အိတ် ၄၀၀၀၀ ကျပ်များဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြောင်း သိရပါသည်။
ကလေးခရိုင်၊ ကလေးမြို့နယ်မှ ဧည့်မထ(စပါး) တင်း ၁၀၀ လျှင် ၈၅၀၀၀၀၊ ဧည့်မထ(ဆန်)‌ ၂၄ ပြည်ပါ တစ်အိတ်မှာ ကျပ် ၂၇၀၀၀၊ ငစိန်(စပါး) တင်း ၁၀၀ လျှင် ၈၀၀၀၀၀ ၊ ငစိန်(ဆန်)၂၄ပြည်ပါ တစ် အိတ်မှာ ၂၆၅၀၀၊ ဧရာမင်း (စပါး)တင်း ၁၀၀ လျှင် ကျပ် ၁၀၀၀၀၀၀၊ ဧရာမင်း(ဆန်)၂၄ပြည်ပါ တစ်အိတ် မှာကျပ် ၃၇၀၀၀ ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြောင်း သိရပါသည်။
ကသာခရိုင်၊ အင်းတော်မြို့နယ်မှ မှော်ဘီ(၂)(စပါး) တင်း ၁၀၀လျှင် ကျပ်၈၀၀၀၀၀၊ မှော်ဘီ(၂) ဆန် ၂၄ပြည် တစ်အိတ် လျှင် ကျပ် ၃၅၀၀၀၊ ဆင်းဧကရီ(၃)(စပါး) တင်း၁၀၀ လျှင် ကျပ် ၇၀၀၀၀၀၊ ဆင်းဧကရီ-၃ဆန် ၂၄ပြည်တစ်အိတ်မှာကျပ် ၃၀၀၀၀၊ ဧရာမင်း (စပါး) တင်း ၁၀၀ လျှင် ကျပ် ၉၅၀၀၀၀၊ ဧရာမင်းဆန် ၂၄ ပြည်ဆန်တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၄၅၀၀၀ ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြောင်း သိရပါသည်။
မုံရွာခရိုင်၊ မုံရွာမြို့တွင် ဧရာမင်း(စပါး)တင်း ၁၀၀ လျှင် ကျပ် ၁၀၇၀၀၀၀၊ ဧရာမင်း(ဆန်) ၂၄ပြည် တစ်အိတ်မှာ ကျပ် ၄၂၀၀၀၊ ပေါ်ဆန်း(စပါး) တင်း ၁၀၀လျှင် ကျပ် ၁၄၅၀၀၀၀၊ ပေါ်ဆန်း(ဆန်) ၂၄ပြည် တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၅၅၀၀၀၊ မနောသုခ (စပါး)တင်း ၁၀၀လျှင် ကျပ် ၈၀၀၀၀၀၊ မနောသုခ(ဆန်) ၂၄ ပြည် တစ်အိတ်လျှင် ကျပ်၃၀၀၀၀ ဖြင့် အရောင်းအဝယ် ဖြစ်နေကြောင်း သိရပါသည်။
ကန့်ဘလူခရိုင်၊ ကန့်ဘလူမြို့တွင် ဧရာမင်း(စပါး)တင်း ၁၀၀ လျှင် ကျပ် ၉၅၀၀၀၀၊ ဧရာမင်း (ဆန်)၂၄ပြည် တစ်အိတ်မှာ ကျပ် ၃၇၀၀၀၊ ပေါ်ဆန်း(စပါး) တင်း ၁၀၀လျှင် ကျပ် ၁၄၀၀၀၀၀၊ ပေါ်ဆန်း (ဆန်) ၂၄ပြည် တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၄၈၀၀၀ဖြင့် အရောင်းအဝယ် ဖြစ်နေကြောင်း သိရပါသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးမှ အခြားတိုင်း ဒေသကြီးများသို့ ဇွန်လ(စတုတ္တ)ပတ်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးမှ အခြားတိုင်းဒေသကြီးများသို့ ဆန် စီးထွက်မှုမှာ ရန်ကုန်သို့ အိတ်ရေ ၃၀၅၀၀၊ မန္တလေးသို့ အိတ်ရေ ၃၉၇၀၀၊ မကွေး သို့ အိတ်ရေ ၁၀၀၀၊ နေပြည်တော်သို့ အိတ်ရေ ၉၀၀၀၊ ရှမ်း(တောင်)သို့ အိတ် ရေ ၇၀၀၀၊ ရှမ်း (မြောက်)သို့အိတ်ရေ ၆၅၀၀၊ စုစုပေါင်းအိတ်ရေ (၉၃၇၀၀) အိတ်၊ တန်အားဖြင့် (၄၆၈၅) စီးထွက်ခဲ့ပြီး၊ ယခု ဇွန်လ(နောက်ဆုံး)ပတ်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှ အခြား တိုင်းဒေသကြီး များသို့ ဆန်စီးထွက်မှုမှာ ရန်ကုန်သို့ အိတ်ရေ ၄၀၀၀၀၊ မန္တလေးသို့ အိတ် ရေ ၅၄၃၀၀၊ မကွေး သို့ အိတ်ရေ ၁၀၀၀၊ နေပြည်တော်သို့ အိတ်ရေ ၈၀၀၀၊ ရှမ်း(တောင်)သို့ အိတ်ရေ ၇၀၀၀၊ ရှမ်း (မြောက်)သို့အိတ်ရေ ၇၀၀၀၊ စုစုပေါင်းအိတ်ရေ (၁၁၇၃၀၀) အိတ်၊ တန်အားဖြင့် (၅၈၆၅) စီးထွက်ခဲ့သည့်အတွက် ယခင်ပတ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ယခုပတ်တွင် အိတ်ရေ (၂၃၆၀၀)တန်အားဖြင့် (၁၁၈၀) ပိုမိုစီးထွက်ခဲ့ပါကြောင်း သိရှိရ ပါသည်။
Read more about စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော စပါး/ဆန်ဈေးနှုန်းများနှင့် စီးထွက်မှုအခြေအနေ
တတိယအကြိမ်မြောက် အာဆီယံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးညီလာခံကို Virtual စနစ်ဖြင့်ကျင်းပ
အာဆီယံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မတီ(ACCP)အနေဖြင့် တတိယအကြိမ်မြောက် အာဆီယံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးညီလာခံကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် Virtual စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပါသည်။
အဆိုပါညီလာခံတွင် အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းဆိုင်ရာ ဒုတိယအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး H.E Satvinder Singh နှင့် အာဆီယံ စားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မတီ အလှည့်ကျ ဥက္ကဌ၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာမိုးမိုးသွယ်တို့က အသီးသီးအဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှုဦးစီးဌာန၊ စားသုံးသူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မှ လက်ထောက် အတွင်းရေးမှူး Atty.Ruth B. Catstelo က ညီလာခံ၏ ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သော " အာဆီယံဒေသတွင်း စားသုံးသူများအတွက် မျှတ၍အနာဂတ်အတွက်အသင့်ရှိသော စျေးကွက်တည်ဆောက်ခြင်း" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးပြောကြားပါသည်။
ထို့နောက် "အာဆီယံဒေသတွင် အားလုံးပါဝင်နိုင်မည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ကူးပြောင်းမှုအတွက် အုတ်မြစ်ချခြင်း"ခေါင်းစဥ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ "အာဆီယံဒေသတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်နှင့် စားသုံးသူအကြား အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်း" ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ "အာဆီယံဒေသတွင်း စားသုံးသူများ၏ ဆောင်ရွက်နိုင်မှုကိုအားကောင်းစေပြီး စားသုံးသူစွမ်းဆောင်နိုင်မှုမြှင့်တင်ခြင်း" ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း အသီးသီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါညီလာခံတွင် အာဆီယံစားသုံးသူရေးရာနှင့်ပတ်သက်၍ အွန်လိုင်းမှတဆင့် လေ့လာနိုင်သော " ACCP Learning Management System (LMS) of the Online Interactive Distance Learning Tools" ကိုလည်းကောင်း၊ အာဆီယံဒေသတွင်း နယ်စပ်ဖြတ် စားသုံးသူ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးစနစ်ဖြစ်သည့် " ASEAN Regional Complaint Platform" ကိုလည်းကောင်း၊ "ASEAN Sustainable Consumption Toolkit" ကိုလည်းကောင်း Launch လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ အွန်လိုင်းအသုံးပြု စားသုံးသူအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးစနစ်" Philippines Online Dispute Resolution System(PODRS) "ကိုလည်း Launch ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ညီလာခံသို့ အာဆီယံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မတီရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများမှသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ ပညာရှင်များတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ညီလာခံ အခမ်းအနားကျင်းပမှုအား Youtue တွင်လည်းကောင်း၊ Facebook page တွင်လည်းကောင်း တိုက်ရိုက် ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Read more about တတိယအကြိမ်မြောက် အာဆီယံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးညီလာခံကို Virtual စနစ်ဖြင့်ကျင်းပ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၏ ဇွန်လအတွင်း လုပ်ငန်းရှင်များအား တွေ့ဆုံ၍ ပညာပေးဆွေးနွေးခြင်းများဆောင်ရွက်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ထုတ်ကုန်လုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိစေရန်၊ ကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏ အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုသုတေသနဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်မှန်း၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ စီးပွားရေးကျင့်ဝတ်နှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တတ်စေရန် လုပ်ငန်းရှင်တွေ့ဆုံ၍ အသိပညာပေးဆောင်ရွက်မှုများကို တိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူးရုံးနှင့် ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက်ဆောင်ရွက်ရာ လျာထားချက်ထက် ပြည့်မီကျော်လွန်၍ လုပ်ငန်းရှင်တွေ့ဆုံခြင်း (၂၅)ကြိမ်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံးမှ တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးဦးဆောင်၍ (၅.၆.၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် မုံရွာကုန်စည်ဒိုင်လုပ်ငန်းရှင်များ (၂၁)ဦးအား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြောကြားရာတွင် ကုန်စည်များအား ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် မိမိတို့၏ကုန်စည်များအား အရည်အသွေး၊ အရေအတွက်၊ အချင်အတွယ်မှန်ကန်စေရေး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ တာဝန်များနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ပညာပေးဆွေးနွေးခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံး များမှလည်း ကလေးခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံးမှ (၁၆.၆.၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် ကလေးမြို့၊ မြို့သာရပ်ကွက် “ရွှေဗဟို”ဆီစက် လုပ်ငန်းရှင်နှင့်လည်းကောင်း၊ တမူးမြို့၊ စော်ဘွားရပ်ကွက် “ဇေယျာဝင်း” ဆီစက်လုပ်ငန်းရှင်နှင့် လည်းကောင်း၊ (၂၁.၆.၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် ကလေးမြို့၊ မြို့သာရပ်ကွက် “ရွှေတော်ဝင်” ဆန်စက် လုပ်ငန်းရှင်နှင့်လည်းကောင်း လုပ်ငန်းရှင်တွေ့ဆုံခြင်း စုစုပေါင်း(၃)ကြိမ်၊ ကသာခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံးမှ (၁၇.၆.၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် ကသာမြို့၊ ရပ်ကွက်(၁) “လာဘ်ကောင်း” သောက်ရေသန့်လုပ်ငန်းရှင်နှင့်လည်းကောင်း၊ (၂၀.၆.၂၀၂၂) ရက်နေ့ ခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံးတွင် “Fast Power” သောက်ရေသန့်လုပ်ငန်းရှင်နှင့်လည်းကောင်း လုပ်ငန်းရှင်တွေ့ဆုံခြင်း စုစုပေါင်း(၂)ကြိမ်၊ ကန့်ဘလူခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံးမှ (၁၁.၆.၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် ကန့်ဘလူမြို့၊ အမှတ်(၂)ရက်ကွက် “ရွှေဝါဝင်း” ဆီဆိုင်လုပ်ငန်းရှင် နှင့်လည်းကောင်း၊ (၁၆.၆.၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် ကျွန်းလှမြို့၊ သစ်ရာမြိုင်ရပ်ကွက်တွင် “လင်းရောင်ဝင်း” စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်နှင့်လည်းကောင်း လုပ်ငန်းရှင် တွေ့ဆုံခြင်း စုစုပေါင်း(၂)ကြိမ်၊ (၂.၆.၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံးမှ စစ်ကိုင်းမြို့၊ အိုးဘိုရပ်ကွက်ရှိ လက်ရက်ကန်းလုပ်ငန်းရှင်နှင့်လည်းကောင်း၊ (၈.၆.၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် မြောင်မြို့၊ တောင်ရပ်ကွက်ရှိ “ဒေါ်အုန်းခ”ပေါင်မုန့်လုပ်ငန်းရှင်နှင့်လည်းကောင်း၊ (၉.၆.၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ မြင်းမူမြို့၊ ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်ရှိ “ရွှေပြည်စိုး” ပေါင်မုန့်လုပ်ငန်းရှင်နှင့်လည်းကောင်း၊ (၁၄.၆.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် မြောင်မြို့၊ အလယ်ရပ်ကွက် ဆီစက်လုပ်ငန်းရှင်နှင့်လည်းကောင်း၊ (၁၇.၆.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်း ခရိုင်၊ စစ်ကိုင်းမြို့၊ ဘော်ဂါရပ်ရှိ ကျောက်စိမ်းအချောထည် လုပ်ငန်းရှင်နှင့်လည်းကောင်း၊ (၂၁.၆.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းမြို့၊ မန်ကျည်းကုန်းရပ်ရှိ “ရွှေလရောင်” ကြိမ်အချောထည် လုပ်ငန်းရှင်နှင့် လည်းကောင်း၊ မြင်းမူမြို့၊ ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်ရှိ “ချစ်စု” ကိတ်နှင့်မုန့်မျိုးစုံ လုပ်ငန်းရှင်နှင့် လည်းကောင်း လုပ်ငန်းရှင်တွေ့ဆုံခြင်း စုစုပေါင်း(၇)ကြိမ်၊ (၆.၆.၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် မုံရွာခရိုင်၊ ချောင်းဦးမြို့နယ်၊ အောင်ချမ်းသာကျေးရွာရှိ “အောင်ချမ်းသာ” ဒိန်ချဉ်လုပ်ငန်းရှင်နှင့်လည်းကောင်း၊ (၈.၆.၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် မုံရွာမြို့၊ ကွေ့ကြီးရပ် “သိန်းသန်းစိုး” ယိုမျိုးစုံ လုပ်ငန်းရှင်နှင့် လည်းကောင်း၊ (၉.၆.၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် မုံရွာမြို့၊ ကွေ့ကြီးရပ် ပေါင်မုန့်လုပ်ငန်းရှင်နှင့်လည်းကောင်း၊ (၁၇.၆.၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် ဘုတလင်မြို့နယ်၊ မြဝတီရပ်ကွက် “ဂျူပီတာ” ဂျင်း၊လက်ဖက် လုပ်ငန်းရှင်နှင့်လည်းကောင်း လုပ်ငန်းရှင်တွေ့ဆုံခြင်း စုစုပေါင်း (၄)ကြိမ်၊ ယင်းမာပင်ခရိုင် ဦးစီးမှူးရုံးမှ (၁၅.၆.၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် ပုလဲမြို့၊ တောင်ရပ်ကွက်ရှိ ဆန်စက်လုပ်ငန်းရှင်နှင့်လည်းကောင်း၊ (၁၆.၆.၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် ယင်းမာပင်မြို့၊ (က)ရပ်ကွက်ရှိ “လင်းရတနာ” ဆီစက်လုပ်ငန်းရှင်နှင့် လည်းကောင်း လုပ်ငန်းရှင်တွေ့ဆုံခြင်း စုစုပေါင်း(၂)ကြိမ်၊ ရွှေဘိုခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံးမှ (၁၅.၆.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ဇီးကုန်းကျေးရွာ “မြတ်ပွင့်ခိုင်” ဆန်စက်လုပ်ငန်းရှင်နှင့်လည်းကောင်း၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ တဂဏန်းကျေးရွာရှိ “ရွှေမိ” စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်နှင့်လည်းကောင်း၊ ရွှေဘိုခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံးတွင် ဆီလုပ်ငန်းရှင်အသင်း ဥက္ကဌနှင့်လည်းကောင်း ရေဦးမြို့နယ်၊ အောင်ချမ်းသာ ရပ်ကွက်ရှိ “ဖြူစင်”ဆန်စက်လုပ်ငန်းရှင်နှင့်လည်းကောင်း လုပ်ငန်းရှင်တွေ့ဆုံခြင်း စုစုပေါင်း (၄)ကြိမ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီး လုပ်ငန်းရှင်များအား စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေပါ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင် စီးပွားရေးကျင့်ဝတ်၊ စည်းကမ်းနှင့်အညီ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် အသိပညာပေးဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ပညာပေးလက်ကမ်းစာစောင်များအား ဖြန့်ဝေခဲ့ပါသည်။
Read more about စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၏ ဇွန်လအတွင်း လုပ်ငန်းရှင်များအား တွေ့ဆုံ၍ ပညာပေးဆွေးနွေးခြင်းများဆောင်ရွက်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနမှ ဇွန်လအတွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် စားသုံးသူကာကွယ်ပေးရေးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲများ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနအနေဖြင့် စားသုံးသူပြည်သူများ ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိစေရန်နှင့် စားသုံးသူပြည်သူများအား စားသုံးသူအခွင့်အရေးများနှင့် အကျိုးစီးပွားများကို ထိရောက်စွာကာကွယ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ခရိုင်/မြို့နယ်များအလိုက် စားသုံးသူကာကွယ်ပေးရေးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ယင်းသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို လျာထားချက်ပြည့်မီ ကျော်လွန်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနှင့် စားသုံးသူရေးရာကော်မတီအစည်းအဝေး(၂/၂၀၂၂) ဆုံးဖြတ် ချက်အရ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်း စားသုံးသူအသိပညာပေးဟောပြောပွဲများကို တက္ကသိုလ်များ၊ ကောလိပ်များ၊ သင်တန်းကျောင်းများတွင် အလေးပေးဆောင်ရွက်နိုင်ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံးအနေဖြင့် (၉.၆.၂၀၂၂)ရက်နေ့ မုံရွာတက္ကသိုလ်တွင်လည်းကောင်း၊ (၂၄.၆.၂၀၂၂)ရက်နေ့ မုံရွာပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်တွင်လည်းကောင်းကျင်းပခဲ့ရာ တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှုး ဦးကျော်ကျော်လွင်ဦးဆောင်မှုဖြင့် ဒု-တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူး ဒေါ်ရီလင်းထွဋ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဝေဖြိုးထက်တို့သည် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ မျှော်မှန်းချက်၊ရည်မှန်းချက်နှင့် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲ ကျင်းပရသည့် ရည်ရွယ်ချက်များ ဆွေးနွေးဟောပြောခြင်း၊ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် စားသုံးသူကာကွယ်ရေး ဥပဒေပါအခွင့်အရေးများနှင့် တာဝန်များအကြောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း၊ စားသုံးသူနစ်နာမှုများအားရှိပါက စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနသို့ ဆက်သွယ်တိုင်ကြားနိုင်သည့် နည်းလမ်း များနှင့် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများအကြောင်းများကို ဟောပြောရှင်းလင်းဆွေးနွေး ဟောပြောခဲ့ကြပြီး တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံးများအနေဖြင့် (၁၀.၆.၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းခရိုင် ဦးစီးမှူးရုံးတွင် ခရိုင်ဦးစီးမှူးဦးဆောင်၍ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးဦးစီးဌာန၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန၊ ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများအားလည်းကောင်း၊ (၂၀.၆.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် ကလေးခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံးမှ တမူးမြို့နယ်တာဝန်ခံဦးဆောင်၍ ခရိုင် ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာန၊ ပန်းချီသင်တန်းတွင်လည်းကောင်း၊ မုံရွာခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံးမှ ဒု-ခရိုင်မှူးဦးဆောင်၍ ရက်ကန်းနှင့် သက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်းတွင် လည်းကောင်း၊ ကန့်ဘလူခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံးမှ မြို့နယ် တာဝန်ခံ ဦးဆောင်၍ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများအားလည်းကောင်း၊ (၂၃.၆.၂၀၂၂)ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းခရိုင် ဦးစီးမှူးရုံးမှ ခရိုင်ဦးစီးမှူးဦးဆောင်၍ သမဝါယမနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)တွင် ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား လည်းကောင်း၊ ကလေးခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံးမှ ခရိုင်ဦးစီးမှူးဦးဆောင်၍ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဦးစီးဌာန၊ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍ ကလေးတက္ကသိုလ်တွင် ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအားလည်းကောင်း၊ ရွှေဘိုခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံးမှ ခရိုင်ဦးစီးမှူး ဦးဆောင်၍ ရွှေဘိုတက္ကသိုလ်တွင် ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများအားလည်းကောင်း၊ စားသုံးသူကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲများ ဆောင်ရွက် ခဲ့ရာ ဇွန်လတစ်လအတွင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနအနေဖြင့် စုစုပေါင်းလူဦးရေ (၁၄၂၃)ဦးအား အသိပညာပေးခြင်းများဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး အသိပညာပေးလက်ကမ်းစာစောင်များကို ဖြန့်ဝေခဲ့ပါသည်။
Read more about စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနမှ ဇွန်လအတွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် စားသုံးသူကာကွယ်ပေးရေးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲများ
တမူးမြို့တွင် စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေး အသိပညာပေး Talk Show ပြုလုပ်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၊ တမူးခရိုင်၊ တမူးမြို့နယ်တာဝန်ခံသည် ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်ပူးပေါင်း၍ စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးအသိပညာပေး Talk Show အား တမူးခရိုင်၊ ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန Community Centre ခန်းမတွင် ၂၃.၆.၂၀၂၂ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အဆိုပါ Talk Show တွင် စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၊ တမူးမြို့နယ်တာဝန်ခံ ဦးစွမ်းရည်မှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စားသုံးသူကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေပါ ကုန်အညွှန်းအမှတ်အသားဖော်ပြခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော ပြဌာန်းချက်များနှင့် စားသုံးသူအခွင့်အရေး များနှင့်တာဝန်များ၊ စားသုံးသူများအနေဖြင့် ကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝယ်ယူသုံးစွဲရာတွင် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများကြုံရပါက အရေးဆိုတိုင်ကြားနိုင်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းနှင့် စားသုံးသူရေးရဦဦးစီးဌာနသို့ ဆက်သွယ်တိုင်ကြားနိုင်သည့် နည်းလမ်းများစသည်တို့ကို အကျယ်တဝင့်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Read more about တမူးမြို့တွင် စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေး အသိပညာပေး Talk Show ပြုလုပ်